'Hokkara Hararii warri qindeessan leellistoota sirna duriiti,' Hogganaa Bulchiinsaafi Nageenyaa naannoo Haraarii - BBC News Afaan Oromoo
Guyyaa kaleessaa namoota ayyaana cuuphaa kabajuuf ba'an keessa dhokatanii magaalaa Harar keessatti kanneen haleellaa qaqqabsiisan qabeenyaafi namarraan miidhaa geessisuu aanga'aan naannochaa ibsaniiru.
Hogganaan Bulchiinsaafi Nageenyaa naannoo Hararii Obbo Naasir Yuuyyaa BBC'tti akka himanitti, jala bultii ayyaana Cuuphaa irratti rakkoo Magaalattiitti dhalateen qabeenyi barbadaa'uufi miidhaan qaamaa gahuu eeran.
"Namoota miidhaa dhihoo kana gahe qindeessuudhaaniifi keessatti hirmaachuudhaan shakkaman 17 too'annaa jala oolchinee qorachaa jirra. Tarkaanfiin madaalawaa ta'es ni fudhatama," jedhan.
Waajjirri Kongireesii Federaalistii Oromoo , Istuudiyoon OMN fi Kolleejjiin Rifti Vaalii isaan haleelaman keessaa ta'uu namoonni qabeenya kanneen hogganan mirkaneessaniiru.
Daayirektarri OMN Girmaa Guutamaa akka jedhanitti haleellaa istuudiyoo isaaniirratti raawwateen qabeenyi miidiyaa hedduun miidhamuu dubbatan.
"Biiroleen OMN, KFO fi Rifti Vaalii gamoodhuma tokkorra jiru. Kanneenitti dhakaa guuruudhaan foddaa caccabsan. Gaazexeessaan achi keessa turellee baqatee bahe. Keessa seenanii meeshaa caccabsan. Waan fudhatameefi waan hafellee adda baasuuf rakkanneerra," jedhan.
Haala qabeenya keessa jiru hordofachuufillee rakkanneerra kan jedhan Aab Girmaan, "Qindeessaan keenya achi jiru ganama kana gara istuudiyoo yoo deemu humnoota nageenyaatiin ol seenuu dhorkameera," jedhan.
Gareen gurmaa'e kun wayita dhakaa darbatee haleellaa qaqqabsiisu Poolisiin naannoos ta'e Raayyaan Ittisa Biyyaa achuma ture kan jedhan Aab Girmaa Guutamaa, "Halli kun daranuu nu sodaachiseera. Nuti qabeenya keenya eegsisfachuuf hamma humna keenyaa waan nurraa eegamu ni hojjenna. Hanga eegdota ramaduutti jechuudha. Garuu mootummaan akkasumatti itti fufa taanaan rakkoo guddaatu dhalata," jedhan.
Namoonni gurmaa'anii haleellaa raawwataa turan qabeenyi karaarra jiru hedduu miidhanillee keenyarratti daran qiyyaafataniiru jedhu Aab Girmaa Guutamaa.
"Jala-bultii Ayyaana Cuuphaa irratti sagantaa waa'ee ayyaanaa qopheessine keessatti hayyoota amantii affeeruun waa'ee alaabaafi mana amantii dubbachaa turre.
Daandiiwwan gurguddoo magaalattii keessattimmoo baandiraan duraanii sun fannifamee ture. Sana ijoolleen Qeerroo baatee irraa guurte. Kanuma haaloo nuun ba'uuf waan nurratti xiyyeeffatan fakkaata," jedhan.
"Waanti mudatee hedduu nu gaddisiisa, nu sodaachisallee. Ammoo nuti doorsifamnee hojii keenya hin dhiisnu. Mootummaanis akka olaantummaa seeraa kabachiisu karaa dandeenye cufaan ni gaafanna."
Hokkara warri qindeessan leellistoota sirna duriiti
Hogganaan Bulchiinsaafi Nageenyaa naannoo Hararii Obbo Naasir: "Namootni waan kana qindeessan warra leelliftoota sirna duriiti. Alaabaa seeraan alaa kan fudhatama hin qabnee fi ummanni jibbu qabachuudhaan hokkarri akka uumamu godhani," jedhu.
Akka hoogganaan kun jedhanitti namoota gareedhaan alaabaa halluun isaa magariisa, keelloo fi diimaa ta'e kan seerri biyyaas akka fannisan hin eeyyamne akka fannifamu barbaadantu rakkoo kana uuman.
Namoonni kunneen kana sababeeffachuun namoonni amantiirratti akka walitti bu'uuniif ka'umsa gochuu barbaadu jedhan.
"Jarri kun warra siyaasa kasaareen adeemu, ajandaa badiif siyaasaa dhoksaa qabateedha."
Gochi kuni hariiroofi waliin jireenya sobootaa shakkii keessa galchuu kan akeekedha kan jedhan Obbo Naasir, gochi walfakkaataan lamuu akka hin uumamneef naannoon Hararii ergasii xiyyeefannaa addaa kennuu himan.
Gama biraatiin waajjirri isaan magaalaa Harar keessaa qaban haleelamuurratti yaada OMNf kan kennan Pirofeesar Mararaa Guddinaa biyya seerri jirutti abbaan fedhe qabeenya barbadeessuun waan nama gaddisiisaati jedhan.
"Nageenya eegsisuuf kan achi jiru qaama hidhateedha. Qaamni hidhate wayita rakkoon kun mudate dhaabatee ilaala. Qaamni nageenyaa aanga'oota mootummaafi qabeenya mootummaa qofa eeguu miti kaayyoonsaa," jedhan.
Qabeenyiifi waajjiraaleen isaanii kutaalee biyyattii keessa jiran hedduusaanii irratti xiyyeeffatamanii miidhamaa jiraachuun hedduu akka isaan yaachisus dubbatan.
Keessoon Magaalaa Harar suuraan
Gama biraatiin Komishinarri Komishinii Poolisii Mootummaa Naannoo Hararii Ramadaan Umar FBCtti akka himanitti ayyaanni cuuphaa rakkoo hammaataan osoo hin dhalatin xumuramuunsaa waan guddaadha jedhan.
Hookkara uumameen humnootii nageenyaa 15 dabalatee namoota 19 irra miidhaan qaamaa ga'uufi qabeenyi hedduun barbadaa'uu kan ibsan Komishinar Umar namoonni yakka kana keessatti hirmaachuun shakkaman 20ni to'annaa seeraa jala oolaniiru jedhan.
Hokkara biroo Dirree Dhawaatttis...
Magaalaa Dirree Dhawaattis kaleessa waaree booda namoota ayyaana kabajuuf ba'an gidduudhaa gareen qindaa'e ba'ee hookkara kaasuun qabeenyaafi namarra miidhaan ga'uu jiraattonni nutti himaniiru.
Jiraataan Magaalaa Dirree Dhawaa maqaasaa eeruu nageenya isaaf sodaate tokko rakkoon kan mudate Araddaa 02 Ganda Jarbaa keessatti ta'uu dubbata.
"Rakkoon kan dhalate kaleessa waaree booda naannoo sa'atii 10tti. Warra hookkara uume durumaanuu ni beekna. Garee saatanaaw ofiin jechuun Dirree Dhawaa keessa socho'aa tureedha.
Namni ayyaaneffatu mana namaa hin gubu, konkolaataa hin gubu. Gareen kun beenzina konkolaataa fi manneen namootaatti qabsiisan. Masjiidotaa fi qabeenya Oromoo adda baasanii caccabsaa turan," jedha.
Magaalaan Dirree Dhawaa dhiyeenya kana nageenya qabdi turte kan jedhu jiraataan kun gareen saatanaaw kun taa'ee ka'ee hookkara waan kaasuuf nageenyi magaalattii amansiisaa miti jedha.
Akka jiraataan kun jedhutti naannawa hookkarri kun mudatetti sochiin hawaasaa fi diinagdee addan citee jiraatullee magaalattiin garri kaan garuu hojii guyyaa guyyaashee itti fufteerti.
Magaalaa Harar: Erga bishaanni nurraa citee ji'a lama jedhu jiraattonni